Ihe omimi nke ihe omuma 5 Ihe di nma ma obu ihe ntanetiri data
Nchịkọta weebụ bụ ụdị dị elu nke nchịkọta data ma ọ bụ ihe ntanetịime ọdịnaya. Ihe mgbaru ọsọ nke usoro a bụ inweta ozi bara uru site na ibe weebụ wee gbanwee ya na usoro ndị a pụrụ ịghọta dị ka ụyọkọ, CSV na nchekwa data. O di mma ikwu na enwere otutu ihe omuma nke ichoputa data, na ulo oru oha obodo, ulo oru, ndi okachamara, ndi oru nyocha na ndi na-abaghi ​​uru nyochaa ihe omuma ihe dika kwa ubochi.Iwepụ data ndị ezubere iche site na blọọgụ na saịtị na-enyere anyị aka ime mkpebi ndị dị irè na ụlọ ọrụ anyị. Ihe odide ise ma o bu usoro nchapu ihe di n'ime ya na-adighi nma.
1. Ọdịnaya HTML
Ibe weebụ niile na-ese site HTML, nke a na-ewere dị ka asụsụ bụ isi maka weebụsaịtị na-emepe emepe. N'ihe data a ma ọ bụ usoro nchịkọta ọdịnaya, ọdịnaya nke akọwapụtara n'ụdị HTML pụtara na brackets ma kpochapu ya n'usoro. Ebumnuche nke usoro a bụ ịgụ akwụkwọ HTML ma gbanwee ha n'ime ibe weebụ. Ọkachamara Ụka ​​bụ ngwá ọrụ nke nchịkọta data nke na-enye aka wepụ data site na HTML akwụkwọ ngwa ngwa.
2. Usoro Ịntanetị dị omimi
3. Usoro nke XPath
Usoro ntanetị bụ akụkụ dị egwu nke nchịkọta weebụ . Ọ bụ ihe nchịkọta nkịtị maka ịhọrọ ihe na usoro XML na HTML. Oge ọ bụla ị mere ka ịchọta data ịchọrọ iwepụ, ihe nhọta gị ahọpụtara ga-agbanwe ya dị ka ụdị nke a na-apụghị ịgụta ọnụ na nke nwere ike ịgbanwe. Imirikiti ngwá ọrụ ntanetị weebụ na-ewepu ozi sitere na ibe weebụ nanị mgbe ị na-akọwapụta data ahụ, ma ngwaọrụ ndị XPath na-achịkwa nhọrọ data na nhọta na nnọchite gị na-eme ka ọrụ gị dịkwuo mfe.
4. Nkwupụta mgbe niile
Site na okwu mgbe nile, ọ dịịrị anyị mfe dee ederede ọchịchọ dị n'ime ụdọ ma wepụ ederede bara uru site na nnukwu weebụsaịtị. Iji Kimono, ị nwere ike ịrụ ọrụ dịgasị iche iche na Intaneti ma nwee ike ijikwa okwu ahụ mgbe niile n'ụzọ ka mma. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na otu ibe weebụ nwere adreesị zuru ezu na kọntaktị kọntaktị nke ụlọ ọrụ, ịnwere ike ịnweta ma chekwaa data a site na iji Kimono dị ka ihe nchọgharị weebụ.Ịnwere ike ịnwale okwu mgbe nile iji kewaa odide ederede na ụdọ dị iche iche ka ị dị mfe.
5. Ntụle Nkọwa Mmasị
Achị weebụ ndị a na-efopụ nwere ike ịnakọta nhazi etemeete, annotations ma ọ bụ metadata, a na-ejikwa ozi a iji chọta ebe snippets data kpọmkwem. Ọ bụrụ na nkọwa ahụ agbakwunyere na ibe weebụ, ntinye aha njirimara bụ nanị usoro nke ga-egosipụta nchọta ahụ achọrọ na chekwaa data gị wepụtara na-enweghị nsogbu na mma. Ya mere, ị nwere ike iji ihe ntanetị weebụ nke nwere ike weghachite atụmatụ data na ntụziaka bara uru site na weebụsaịtị dị iche iche Source .